अस्थायी शिक्षक अभिशाप कि वरदान ? | EduKhabar
अस्थायी शिक्षक अभिशाप कि वरदान ?
अस्थायी शिक्षकहरुको आन्दोलन यसको भर्ना पद्धतीमा गरिएका नीतिगत निर्णयहरु वर्तमान अबस्थामा कति सान्र्दभिक छ भन्ने बिषय नै यो लेखको विषय हो । नेपाल सरकार र अस्थायी शिक्षकहरुका बीचमा पटक पटक भएका वार्ता, सहमती र सम्झौताहरु कति सान्र्दभिक छन् भन्ने सम्बन्धमा अहिलेका युवा वर्गले नजिकबाट नियाली रहेका छन् । कार्यरत धेरै शिक्षकहरु शिक्षा क्षेत्रका अभिशाप हुन वा वरदान हुन् भन्ने यतिखेर बिश्लेषणको बिषय बनेको छ ।
अस्थायी शिक्षकहरुलाई उचित व्यबस्थापन गर्न न त सजिलो छ न त सहजै बिदाइ गर्न । अस्थायी शिक्षकहरुले बिस्तारै गुणस्तरीय शिक्षाको भबिष्य कमजोर बनाउने र अन्ततः शिक्षा क्षेत्र राजनीति गर्ने अखडा बन्न जान्छ की भन्ने बहसको बिषय बन्न थालेको छ ।
नेपालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धती योजना २०२८ लागु भए देखि देशको शैक्षिक क्षेत्रमा रा.सि.प.यो २०२८ कोषे ढङ्गा सावित हुने धेरैको आँकलन थियो बिडम्वना यसो हुन सकेन । रा.सि.प.यो २०२८ को नवौं संशोधन हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा शिक्षा क्षेत्र निकै दर्दनाक अबस्थामा आइपुगेको छ । स्थानीय चुनाव र चाडपर्वको अनुकुल समयमा संसदको कोरम पुराएर निर्णय गर्ने नाममा करीव २६ प्रतिशत साँसद संसदमा उपस्थित भएको बेलामा केही माननीयको बिरोधका बाबजुद पनि ऐन पारित गरियो । खासमा नवौं संशोधन सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर निर्माणको लागी भन्दा पनि बिशेष व्यक्तिहरुको मोहमा दलीय आग्रहको घेरामा वा झोले शिक्षकहरुले राजनीतिक लविङबाट हुने राजनीतिक दवाबबाट सम्भव भएको हो । सार्वजनिक शिक्षालाई यस्ता कार्यले ५० औं बर्ष पछाडि धकेलेको छ भने अझ यता बिभिन्न शिक्षाविद् एवं विद्यार्थी संगठनहरुले असोज ३ लाई शिक्षा क्षेत्रको कालो दिन भनेर उद्घोष गरेका छन् । व्यबहारिक हिसावले आठौं संशोधन केही मात्रामा ठीक भए पनि नवौं संशोधन अशोभनीय र लज्जास्पद छ । जुन आम रुपमा स्थापित शैक्षिक मुल्य र मान्यता विपरित छ ।
नवौं संशोधन अनुसार शिक्षक बन्नको लागी १० कक्षा पास गर्न भन्दा शिक्षक सेवा आयोग पास गर्न सजिलो बनाइ दिएको छ । अब आन्तरिक शिक्षकहरु १०० पुर्णाङ्कमा ४० नम्बर प्राप्त गरे सिधै स्थायी शिक्षक बन्ने छन् । यसलाई बिश्लेषणत्मक तरिकाले हेर्दा ४० नम्बर लिएर पास हुनु भनेको ६० नम्बर नजान्नु हो । थोरै विषय बस्तु जान्ने र धेरै विषय बस्तु नजान्ने व्यबस्था अनुसार आयोग पास गरेका शिक्षकहरुले भोलीको शैक्षिक गुणस्तर कसरी निर्माण गर्न सक्लान् ?
अहिले सामुदायिक विद्यालयमा करीब ६० लाख विद्यार्थि अध्ययनरत छन् भने करीब २६००० शिक्षक आन्तरिक रुपमा कार्यरत छन् । यता सात लाख भन्दा बढी बिद्यार्थी शिक्षक बन्नका लागी अध्यापन अनुमती पत्र प्राप्त गरी आयोगको तयारी गरि बसि राखेका छन् र करिब ५ लाख विद्यार्थि अध्यापन अनुमती पत्रको परिक्षाको पर्खाइमा छन् । यस बर्षको मात्र तथ्याँक हेर्दा करिब ३ लाखको हाराहारीमा विद्यार्थि सामुदायिक विद्यालय छाडि नीजि विद्यालयतिर आर्कषित भएको देखिन्छ । यस बाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने सामुदायिक विद्यालयमा पढाइको गुणस्तर क्रमशः घटदै गएको छ । परिणमतः विद्यार्थी संख्या पनि घट्दै गएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको एक अध्ययनले सामुदायिक विद्यालयमा सिकाइ स्तर अत्यन्त निराशाजनक रहेको निस्कर्ष निकालेको छ । २ – ३ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले वाक्य लेखन सम्म पनि गर्न सक्दैनन् । केही दिन अघि शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक गुणस्तर परिक्षण केन्द्र ( इआरओ) ले गरेको अध्ययनले ६० प्रतिशत विद्यार्थि नेपाली मै सरल वाक्य लेख्न समेत नसकेको औंल्याएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागी गठन गरिने विद्यालय व्यबस्थापन समिति निर्माणमा ठुलो राजनीतिक चलखेल र अपराधिक घटना समेत हुने गर्दछ । अव यसरी गठित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयको हक हितका लागी भन्दा पनि आफ्नो पार्टीगत राजनीति गर्ने र कार्यकर्ता भर्ति गर्ने व्यारेक बनाउने खतरा बढ्दो छ । बालविकास राहत अनुदान कोटा पि.सि.एफ तथा दरबन्दी वितरण देखि शिक्षक सरुवा बढुवा र नियुक्ति समेतमा विद्यालय व्यबस्थापन समितिले ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने गर्दछ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जिल्ला शिक्षा समितिको गठन तथा ब्लक भवन र अन्य सरकारी अनुदान वितरणमा राजनीतिक दलको चरम हस्तक्षेप हुने गर्दछ । यसरी शिक्षाको अंश अंशमा राजनीतिकरण गर्दा शिक्षाको गुणस्तर कहाँ पुग्ला ? यस्ता प्रवृतिले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नुको साटो शैक्षिक प्रणली नै अस्त व्यस्त र कमजोर बनाउने शैक्षिक माफिया मोटाउने खेल गरिदैं छ । यस बारेमा नेपाल सरकारले नेपाली युवाहरुलाई विश्वासमा लिने वातावरण तयार गर्न सक्छ कि सक्दैन ? अर्को प्रश्न छ । यदि यसो हुन नसके नवौं संशोधनको विरुद्धमा लाखौ युवाहरु सडकमा उत्रन बेर लाउने छैनन् ।
शर्मा शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन विरुद्ध आन्दोलित विद्यार्थीका अगुवा हुन् ।
Chhatup Lama9 months ago
यो लेख समय सान्दर्भिक छ । यदि सरकारले समयमै 8 बिद्यार्थी संगठनको आवाजलाई अपहेलना गरेमा नेपाल सरकारले सामुदायिक बिद्यालयको गुणस्तरलाई भविष्यमा उधो गति तर्फ लाॅदैछ भन्ने कुरामा कुनै दुई मत हुनै सक्दैन ।
Guneshwar Thakur9 months ago
licence ko bigyapan chhadai karna launuparyo
Meghanath subedi9 months ago
40 अङ्क ल्याउने असक्षम भन्न चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ विगत 2070 /2071को आयोग का केही विषय मा माग संख्या भन्दा कम pass भएको देखिएको थियो के ती just pass भएका पनि अयोग्य हुन ? र अर्को कुर बिद्यर्थी हरु आफ्नो हक को कुर गै आन्दोलन मा छन के आज सम्म अस्थाई म झुलाएर राखिएका र उमेर जान लागेका शिक्षकका लागि रोजगारिको मौलिक हक प्राप्त गर्ने हक छैन? र खुला प्रतिश्पर्धा को लागि त नय सिर्जित सिट पो हुन ती पुराना सिट त उनैका हुन जो त्यतिखेर योग्य थिए र अहिलेका हामी विद्यार्थी हरुको उमेर नपुग्दैको सिटमा हामीले दाबी गर्नु लज्जास्पद कुरो हो अफ्नो अधिकार्को कुरो गर्द अरुको अधिकार हनन गर्नु राम्रो होइन। अस्थाई शिक्षक को करन्ले मत्र शिक्षा खस्किएको होईन system maa परिबर्तन गर्न जरुरी छ । सबैलाइ थाहा भएको कुरा सँस्थागत school को अबस्था हेर्न सकिन्छ ।योग्य शिक्षकले मात्र शिक्षा क्षेत्र परिवर्तन हुन सक्दैन naya तरिकाले सोचौँ
मेरो नाति ७ बर्षको भयो । कक्षा १ मा पड्दैछ Small Heaven School मा तर उसले नेपाली पड्न र वाक्य लेख्न जान्दैन । यो समस्या सरकारी स्कुलमा धेरै छ । यसको कारण बोर्डिङ स्कुलको देखासिकी कम उमेरमा कक्षा १ मा भर्ना हुनु हो । बच्चाको उमेर ५ बर्ष पुगेपछि उसलाई शिशु कक्षामा भर्ना गराउनुपर्ने हो तर यसको बिपरित हुनगएकोले बच्चाको उमेर अनुसार उसले सिक्न सकेको छैन । उमेर र सिकाइको स्तरमा सन्तुलन भएको पाइदैन ।